FIFANAFIHAN’NY SAMY MPIANATRY NY CEG : Zazalahy 14 taona maty vodarodaroka
Efa notaterina teto amin’ny gazety Ino Vaovao Faritra herinandro vitsy lasa ny fisiana andiana mpianatra mpisetrasetra ao Toamasina. 9 janvier 2020
Miady izy ireo rehefa mirava antoandro na amin’ny hariva. Ny mpianatry ny CEG Ratsimilaho sy CEG Radama no tena voatonontonona amin’izany fomba ratsy izany.
Ny marainan’ny alarobia 8 janoary tokony tamin’ny 9 ora, dia niafara tamin’ny fahafatesana ny fanafihana nataon’andiana mpianatra. Ankizilahy mpianatra antsoina hoe Rakotonandrasana Rayan Mederos 14 taona kilasy faha-6 ao amin’ny CEG Ratsimilaho no lasibatra tamin’izany.
Nitondra hazo be ireto mpianatra nanafika mpianatra tao amin’ny CEG Ratsimilaho ireto. Mbola tsy fantatra mazava kosa aloha hatreto hoe mpianatra avy aiza ireto nanafika ireto. Vaky nandositra ireo mpianatra maro raha nahita izany. Nifanindran-dalana tamin’ny fotoana nanasana ireo mpianatra namonjy fodiana no nisehoan’izany. Tsy mbola nisy fianarana tao amin’n CEG Ratsimilaho ny andron’ny alarobia io ka nampodiana ny mpianatra. Teny an-dalana hody no nisy io fanafihana io. Izany hoe efa tsy tao anatin’ny faritry ny sekoly fa teny ivelany.
Lasibatry ny daroka teo amin’ny lohany sy fony Rakotonandrasana Rayan ka maty tsy tra-drano. Nentina teny amin’ny Hopitaly saika hanaovana ala nenina saingy efa tsy nisy azo natao intsony. Monina ao Androranga parisela 22/11 ity tovolahy namoy ny ainy ity. Mandeha ny fikarohana ireo andiana mpianatra nahavanon-doza, ka araka ny vaovoa voaray farany dia efa nisy ireo mpidaroka no voasambotra. Mila dinihina lalina ny vahaolana maharitra momba izao tranga izao. Misy sahady ny hevitra mipoitra fa tokony hisy mpitandro filaminana manao fanamiana sivily manara-maso ny eny amin’ny faritra misy ny CEG Ratsimilaho sy CEG Radama.